Dilka Kim Jong-nam oo khilaaf dublamaasi dhaliyay - BBC News Somali
Dilka Kim Jong-nam oo khilaaf dublamaasi dhaliyay
Image caption Dilkii madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi walaalkii ee Kuala Lumpur ka dhacay todobaadkii hore ayaa muran dublamaasiyadeed horseeday
Dawladda Malayshiya ayaa u yeertay danjirahoodii Kuuriyada Waqooyi ka dib markii uu ka sii daray muranka ku saabsan dilkii Kim Jong-nam oo ay isku aabo yihiin madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Kim Jong-nam ayaa si aan macluumaad badan laga haynin ugu geeriyooday magaalada Kuala Lumpur todobaadkii hore, booliisku waxay rumaysan yihiin in la sumeeyay isaga oo sugaya duulimaad.
Booliiska ayaa sheegay in ay hadda baadigoobayaan afar ruux oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay.
Danjiraha Kuuriyada Koonfureed ee dalka Malayshiya ayaa sidoo kale su'aalo laga waydiiyay hadal uu horay u jeediyay.
Inkastoo uu jiro tuhun ballaaran oo ku aadan in Kuuriyada Waqooyi ay ka dambaysay dilkan, haddana wax caddayn ah looma hayo, Pyongyang illaa iyo hadda war rasmi ah kama aysan soo saarin dhacdadaas.
Kuuriyada Koonfureed ayaa sheecisay in Kuuriyada Waqooyi ay soo maleegtay dilkaas.
Dhanka kalana muuqaal u muuqda in uu muujinayo dilka ayaa soo baxay, waxaana laga sii daayay telefeshin Japan laga leeyahay.
Siduu ku yimid murankan dublamaasiyaddu?
Malayshiya ayaa ka mid ahayd dalal kooban oo joogteeyay calaaqaadka dublamaasi ee ay la leeyihiin Kuuriyada Waqooyi, balse dilkan ayaa murjiyay xaaladda.
Todobaadkii hore ayayna Malayshiya diiday in ay aqbasho dalab uga yimid Kuuriyada Waqooyi oo ahaa in ay fasaxaan Maydka Kim isaga oon baaritaan lagu samaynin sababta uu u dhintay.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo walaalkiis la dilay
Kuuriyada Konfureed oo xaqiijisay in la dilay madaxweynaha Kuuriya Waqooyi walaalkii
Baaritaankii maydka Kim Jong-nam oo la soo gabogabeeyay
Arrintaas ayaa sababtay in danjraha Pyongyang ee Malayshiya Kang Chol in uu Kuala Lumpur ku eedeeyo in ay "wax qarinayso"
Arrintaas ayaana sababtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Malayshiya ay si caro leh uga jawaabto iyada oo sheegtay in eedayntaasi "aysan sal lahayn". waxayna intaas ku dartay in ay masuuliyadooda tahay in ay baaraan dhimashada Kim maadaama oo uu Malayshiya ku dhintay.
Image caption Kang Chol ayay u yeertay wasaaradda arrimaha dibadda ee Malayshiya hadalkii uu sheegay dartii
Muxuu mudanayaa maydka Kim?
Xukuumadda Malayshiya waxay hadda sugaysaa natiijada ka soo baxday baaritaankii lagu sameeyay maydka. Balse danjire Kang Chol ayaa sheegay in dalkiisu uusan aqbali doonin natiijada maadaama oo baaritaanka la sameeyay iydoo aysan joogin cid ka socota Waqooyiga Kuuriya.
Malayshiya ayaa sidoo kale diiday in ay fasaxdo maydka Kim, iyadoo sheegtay in ay u baahan tahay in ay qaaddo baaritaan ku saabsan dheecaaanka hide sidaha ee DNA-ga loo yaqaanno. Booliiska ayaana hadda baadigoobaya qof ka mid ah qoyskiisa.
Waxaa la rumaysan yahay in dad ka mid ah qoyska Kim ay kala joogaan Beijing iyo Macau.
Abdul Samah Mat oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliiska Malayshiya ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in haddii aysan jirin dad ehelkiisa ah oo doonaya mayka Kim isla markaasna la soo gabogabeeyo dhammaan baaritaannada in markaas ay ku wareejin doonaan maydka safaaradda Kuuriyada Waqooyi.
15 Febraayo 2017
Shiinaha oo diiday dhuxusha Kuuriya Woqooyi
3 Febraayo 2017
Kuuriyada Woqooyi oo "gantaal tijaabisay"
12 Febraayo 2017
Musuqmaasuq hareeyay Dalka Koonfur Kuuriya
2 Jannaayo 2017